Iphaneli yocingo lwentsimbi e-China yentsimbi yokwenza isicelo soMenzi kunye noMthengisi | Pro kocingo
Iphepha eligqityiweyo sisinyithi sephepha esiqatywe ngomatshini sokwenza iipateni ezininzi zemingxunya. Kunzima ukubetha xa kufikwa kumba wokubiya. Ucingo lwetsimbi olutyhidiweyo luneempawu zesithuba sabucala kunye nembonakalo enomtsalane xa kuthelekiswa nocingo oluhlabayo.
PRO.FENCE ibonelela ngesinyithi sephepha lesinyithi esenziwe ngentsimbi kwaye sagqitywa ngomgubo wawutyabeka. Amandla aphezulu esinyithi kunye nobunzima bayo benza ukuba kulungele ukubiya ngokhuseleko. Kwaye ugqibile ngomgubo wawutyabeka wenze uluhlu olubanzi lombala ukuhlangabezana neemfuno zakho zokuhombisa ezahlukeneyo. Ngaphandle kokubiyela kusetyenziswa, iphepha lesinyithi eligangathiweyo lineentlobo ngeentlobo zezicelo kwiiprojekthi zolwakhiwo, kubandakanya udonga lomgangatho kunye neepaneli zesilingi, iiphaneli zokufaka iphuli, i-sunshades, kunye namasango kunye nokunye okuninzi okusetyenziswayo. Ngokhetho olukhulu lweepateni ezigqityiweyo, iphepha lesinyithi eligqunyiweyo liya lisaziwa ngakumbi kuyilo loyilo lokwakha kunye neenkcukacha.
Iimakhishithi zetsimbi ezigqityiweyo ziimveliso ezininzi kwaye zinezicelo ezahlukeneyo. Ingasetyenziselwa ukwakha iisilingi, izinyuko, iibhalkhoni, iziciko zokhuselo zoomatshini. Ikwacwangciswa ngocingo kwaye isetyenziswe njengokhuseleko kunye nokuhombisa umqobo kwipropathi yakho.
Iphaneli ubukhulu: 1.2mm
Ubungakanani bePaneli: H600-2000mm × W2000mm
Iposi: 50 × 50 × 1.5mm
Kugqityiwe: Powder wawutyabeka
1) Ukuchaneka kunye nokuSebenza
Oomatshini bethu abaphambili banokuqhubekeka ngokuchanekileyo iiphaneli zentsimbi ezenziwe ngotywala ngobukhulu obuqinisekileyo ziya kuqinisekisa ukuba iiphaneli zinokwanelisa iimfuno zakho kwaye zingene kunye kwisiza ngokufanelekileyo.
Sinokubonelela ngeplanethi yokugquma kwiipateni ezahlukeneyo kubandakanya umngxuma ojikelezayo, umngxuma wesikwere, umngxuma odibeneyo kunye nokubonelela ngemibala eyahlukeneyo. Inokuhombisa kwaye yongeze umtsalane othile kwipropathi yakho.
3) Inkonzo ehlala ixesha elide
Ucingo lwesinyithi olutyhidiweyo sesona sisombululo sisiso ukuba ukhangele uthango olulungileyo ngokuchasene nokubola kunye nokuhlala ixesha elide. UQINISEKISO lwenziwe kwiphepha elenziwe ngesinyithi kwaye lwenziwa ngomgubo wombane osongelwe ukuqinisekisa ukubonelela ngenkonzo ehlala ixesha elide.
Into NO.: PRO-13 Ixesha Lead: 15-21 DAYS Imveliso Orgin: CHINA
Egqithileyo I-BRC yeWelded Mesh Fence yoBugcisa bokwakha
Okulandelayo: M-ezimilise Isefu welding enemingxuma Fence Kuba Izityalo Solar